Ajụjụ - TXJ International Co., Ltd.
Activies / ngosi
Vintage Pu oche
Kpebisiri Glass Coffee Isiokwu
Efere Coffee Isiokwu
Glass Coffee Isiokwu
MDF Coffee Isiokwu
Izu Ike oche
Olee ụdị ngwaahịa TXJ tumadi obibi?
Anyị tumadi na-emepụta eri nri, iri oche na tebụl kọfị. Ndị a 3 ihe na-exported a otutu.
Ka ọ dịgodị, anyị na-ezitekwara iri bench, TV-Guzosie, Computer Oche.
Gịnị bụ gị kacha nta ibu?
Malite site otu akpa. Na gburugburu 3 ihe nwere ike mix otu akpa. MOQ maka oche 200pcs, table bụ 50pcs, kọfị table bụ 100pcs.
Gịnị bụ gị mma ọkọlọtọ?
Anyị na ngwaahịa nwere ike gafee EN-12521, EN12520 ule. Na maka European ahịa, anyị nwere ike na-enye EUTR.
Gịnị bụ gị mmepụta ọganihu?
Anyị setịpụrụ dị iche iche mmepụta ogbako karị maka table & oche, dị ka MDF ogbako, n'obi iko usoro omumuihe, metal workshop.etc.
Olee otú TXJ ịchịkwa àgwà?
Anyị QC na QA ngalaba na-achịkwa nnọọ àgwà si ọkara okokụre na okokụre ibu. Ha ga-inyocha ibu tupu itinye.
Gịnị bụ gị akwụkwọ ikike iwu?
Anyị na ngwaahịa na-ebu a otu afọ akwụkwọ ikike ekpuchi n'ichepụta ntụpọ. The akwụkwọ ikike na-emetụta nanị a ezinụlọ ojiji nke anyị na. The akwụkwọ ikike anaghị ekpuchi mgbe eyi na dọkatụrụ adọka, achagharị n'ihi n'ebe ìhè, n'ụzọ, shrinkage ma ọ bụ Pilling nke ihe, ma ọ bụ mkparị na-eyi.
Gịnị bụ gị alaghachi ma ọ bụ mgbanwe iwu?
Dị ka ngwongwo anyị na-na-ọ dịkarịa ala otu akpa ka ndị ahịa. Tupu itinye anyị QC ngalaba ga inyocha ibu ka obi sie quality ok. Ọ bụrụ na e ọtụtụ ihe mebiri emebi mgbe na ebe mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, anyị sales otu ga-ahụ a kacha mma ngwọta na-eme ka elu maka unu.
Gịnị bụ gị nnyefe oge?
Abụkarị gburugburu 50 ụbọchị na-eme ka nnukwu ibu.
Gịnị bụ ugwo nhọrọ?
T / T ma ọ bụ L / C bụ.
Nke mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ị nnyefe ngwá ahịa si?
Anyị nwere ugwu na n'ebe ndịda mmepụta isi. N'ihi ya ngwá ahịa si n'ebe ugwu factory nnyefe si Tianjin n'ọdụ ụgbọ mmiri. Na ngwá ahịa si n'ebe ndịda factory nnyefe si Shenzhen n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Nwere ike ị na-enye sample maka free?
Sample dị na ihe-ndebe a chọrọ dị ka TXJ ụlọ ọrụ iwu. Mgbe ihe-ndebe ga-laghachiri gị mgbe iji enen.
Olee otú ọtụtụ ụbọchị ọ ga-ewe iji mee ka sample?
Abụkarị 15 ụbọchị.
Gịnị bụ cbm na ngwugwu arọ maka onye ọ bụla ihe?
Anyị nwere nkọwapụta nke ọ bụla oche tinyere arọ, olu na nke ukwu na 40HQ nwere ike ijide. Biko kpọtụrụ site email ma ọ bụ ekwentị.
M nwere ike ịzụta table ma ọ bụ oche ọtụtụ iberibe?
Anyị nwere MOQ maka iri oche na obere ibu ike-emepụta. Biko ịghọta.
Na-oche & tebụl tupu-kpọkọtara?
Na-adabere na gị chọrọ. Na-emekarị ahịa chọrọ ya juru n'ọnụ kụrụ aka ala, ụfọdụ nwere ike mkpa tupu kpọkọtara. Kwaturu ngwugwu ga-azọpụta ndị ọzọ ohere, nke bụ na-ekwu ọzọ nwere ike na-etinye na 40HQ na ọ bụ ihe aku. Ma na anyị nwere nzukọ ntụziaka mmasị na katọn.
Gịnị bụ àgwà nke katọn? Nwere ike na-adị nnọọ ike?
Anyị na-eji 5-oyi akwa corrugated katọn na nkịtị quality ọkọlọtọ. Ọzọkwa anyị pụrụ inye mail iji ngwugwu dị ka kwa gị chọrọ, nke bụ ihe siri ike.
Ị nwere a showroom?
Anyị nwere showroom na Shengfang na Dongguan ọrụ ebe ị nwere ike ịlele anyị iri table, iri oche, kọfị table.
Ole maka mbupu na-eri?
Ọ na-adabere na ebe ebe mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ, biko kpọtụrụ anyị maka ihe ọmụma zuru ezu.
Gịnị na-eme ka m iji ma ọ bụrụ na m nwere njikọ nsogbu ma ọ bụ oru ihe isi ike?
Na nke ọ bụla katọn, anyị ga-etinye nzukọ ntuziaka n'ime ga-enyere gị ka a kpọkọta ndị ngwaahịa. Mgbe ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla, biko Email anyị. Anyị ga-enyere gị aka idozi.
Nwere m Ike a TXJ Ngwá ụlọ katalọgụ zitere m?
Ndị kasị mma na kasị zuru ezu akụ maka niile nke ngwaahịa bụ anyị website. Anyị imelite ọhụrụ ngwaahịa na website oge obula.
Mdf Isiokwu , Uk Fair Pu-eri nri oche , Mdf Coffee Isiokwu , Pu oche , Vintage Pu-eri nri oche , Glass Coffee Isiokwu,
Xinzhang emepe Mpaghara, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, China 065701